Fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Faritra | Primature
Lapan’i Mahazoarivo, ny 30 septambra 2021 – Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy androany tao Ampefy, Faritra Itasy, ny andiany faharoa amin’ny andro iraisam-pirenena ho an’ny Faritra (Journée Internationale des Régions) – JIR, hetsika ara-toekarena sy ara-kolotoraly, izay eo ambany fiahian’ny Filohan’ny Repoblika, ary eo ambany fitarihan’ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian.
« Itasy, ivon’i Madagasikara, misokatra ho an’ny fisandratan’ny taranaka mifamdimby« , io no lohahevitra banjinina mandritra ny fankalazana.
Miainga eny ifotony ny vahaolana entina hampandrosoana an’i Madagasikara hoy ny Praiminisitra, ary nohamafisiny fa tsy misy fampandrosoana azo eritreretina raha tsy mipetraka ny fitsinjaram-pahefana. Izany indrindra no antony nametrahana ny governoran’ny Faritra izay nomena fahefana hanapa-kevitra amin’ny fanatanterahana ny zotram-pampandrosoana; nomena tetibola; ary nomena fampitaovana, indrindra ho an’ny fanamboaran-dalana.
Miankina amin’ireo tompon’andraikitra rehetra eny ifotony na olom-boafidy na olom-boatendry anefa ny fanarenana ny fahatarana sy ny fampandrosoana haingana ny firenena.
Manan-danja tokoa ny JIR izay niarahan’ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny sy ny Ministeran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana nikarakara, satria mariky ny fanatanterahana ny vinan’ny Filohan’ny Repoblika, dia ny tsy hisian’ny Faritra ho latsa-danja amin’ny fampandrosoana, ary hahitana taratra ny tanjaka ara-toekaren’ny Faritra tsirairay avy, ka manamafy ny fiaraha-miasa amin’ireo mpiara-miombon’antoka.
Teo ampamaranana ny lahateniny dia nisaotra ireo ministera voakasika amin’ny fikarakana, sy ireo mpiara-miombon’antoka nahatontosana ny hetsika ny Praiminisitra, ary notsiahiviny ireo ezaka vita ho fampandrosoana ny Faritra Itasy, toy ny fametrahana ny Oniversite manara-penitra, ary indrindra ny fanorenana tanàna vaovao ao Arivonimamo, « mila mijery zavatra maharitra sy lovainjafy isika« , hoy hatrany izy.
← Fankalazana ny faha-60 taona nijoroan’ny Polisim-pirenena
Andro iraisam-pirenena ho an’ny zokiolona →